FLTXNY FR 400W 800W yakatwasuka mhepo turbine jenareta
Q 100w- 3000w vertical coreless maglevation mhepo tur...
Q chimiro 600w- 3kw Alternative coreless vertical mhepo ...
FX 3000W pamba shandisa vertical mhepo turbine jenareta
FS 1000W 2000W 3000W Vertical Helix Mhepo Turbine Gen...
FH 5KW 10KW 20KW ON/OFF grid yakatwasuka turbine yemhepo
FH 100W-800W 12V 24V 48V Coreless Wind Turbine Jenari...
SC 400W 600W 800W AC diki mhepo jenareta yeimba/s...
S3 600w 800w 12v 24v 48v diki yakatwasuka mhepo turbi...
China fekitari 600w 3 5 bladesHorizontal axis mhepo tu...
FLTXNY 1kw 2kw 3kw Horizontal Wind Turbine Jenareta...
800w 12v 24v Itsva Yakagadziridzwa Mhepo Turbine Jenareta Wi...
300w 400w 12v 24v 48v Permanent Magnet Generators For Wind Turbine
1. Gearless, yakananga dhiraivha, yakaderera RPM jenareta
2.Small size uye lightweight: Hukuru hwayo uye uremu huri 30% pasi peiyo yemagetsi emagetsi.
3.Excellent heat dissipation nekuda kweAluminium alloy out frame frame uye yakakosha mukati.
4.permanent magineti jenareta rotor uchishandisa patented alternator, pamwe chete neyakakosha stator dhizaini, zvinobudirira kuderedza chizvarwa chekupikisa torque, uku ichibvumira mamwe maturbine emhepo uye jenareta ane maitiro akanaka anoenderana, iyo unit inomhanyisa kuvimbika.
FLTXNY 30KW 50KW 100KW yakatwasuka mhepo turbine pane grid system
1.Low start up speed, 6 blades, high mhepo simba rekushandisa
2.Easy installation, tube kana flange yekubatanidza sarudzo
3.Mabhuradhi anoshandisa unyanzvi hutsva hwekuumbwa kwejekiseni, inofananidzwa neyakagadziriswa aerodynamic chimiro uye chimiro, izvo zvinowedzera kushandiswa kwesimba remhepo uye gore negore.
4.Muviri wekukanda aruminiyamu alloy, ine 2 bearings swivel, zvichiita kuti ipone mhepo ine simba uye kumhanya zvakanyanya zvakachengeteka.
5.Patented permanent magnet ac generator ne special stator, zvinobudirira kuderedza torque, kunyatsoenderana nemhepo vhiri uye jenareta, uye chengetedza kushanda kwehurongwa hwose.
6.Controller, inverter inogona kufananidzwa accroding kune zvinodiwa nevatengi
1.wind turbine 1 set(hub,muswe,3/5 blades,jenareta,hood,mabhaudhi uye nzungu).
2.wind controller 1 chidimbu (Sarudzo).
3. yekuisa chishandiso 1 set.
4.flange 1 chidimbu.
FLTXNY 5kw 10kw 15kw 20kw yakachinjika mhepo turbine jenareta
Kusarudzwa kwesimbi yesimbi yakacheneswa asi ikava, huremu huremu, chimiro chakanaka, kuderera kwakaderera.
Kuwedzera kwegirazi faibha yakasimbisa epurasitiki rotor blades, match pamwe nekugonesa kweaerodynamic dhizaini uye dhizaini dhizaini, kutanga kumhanya kwemhepo kwakadzikira, yakakwira mhepo simba rekushandisa coefficient, kuwedzera simba rekugadzira simba.
Kugadzirwa kwesimba uchishandisa patent tekinoroji ye ndfeb yekusingaperi magineti alternator rotor, stator yeakakosha dhizaini, zvinobudirira kuderedza torque yejenareta, panguva imwechete inoita kuti maturbine emhepo uye majenareta ave neakawanda akanaka ekufananidza hunhu, kuvimbika kwekushanda kweyuniti.
Stern rudder inotora dhizaini yeotomatiki yaw, kugona kwakasimba kurwisa dutu, mashandiro akachengeteka uye akavimbika.
Kusarudzwa kwe anticorrosive epoxy zinc-rich primer uye polyurethane enamel, uv uye asidi mvura inodzivirira, mhute yemunyu.
Gira otomatiki yekuzadza muchina, midziyo yakangwara inochinja-chinja kushanda, hupenyu hurefu hwebasa.
Optional yakanyanya simba yekutevera yakangwara controller, nyatso gadzirisa iyo voltage yazvino.
FLTXNY SIMBA 1KW – 50KW Gearless Permanent Magnet Jenareta AC Alternators
1. Rare pasi zvachose magineti jenareta
2.low kutanga-up torque, kushandiswa kwesimba remhepo yakakwirira;
3.small size, yakanaka kutaridzika, yakaderera vibration
4. kugadzirwa kwevanhu kushamwaridzana, kuiswa nyore, kugadzirisa uye kugadzirisa.
5.permanent magineti jenareta rotor kushandisa
patented alternator, pamwe chete neyakakosha stator dhizaini, zvinobudirira kuderedza chizvarwa chekupikisa torque, uku
kubvumira mamwe maturbine emhepo uye jenareta ane maitiro akanaka ekufananidza, iyo unit inomhanya kuvimbika
100W 200w 300w 12v 24v 48v mamwe majenareta echigarire magineti
1. Chimiro chakareruka, kuvimbika kwepamusoro.
2. Saizi duku, uremu huremu, simba guru.
3. Pakati uye yakaderera kumhanya simba rekugadzira, kushanda zvakanaka.
4. Inogona kuwedzera zvakanyanya hupenyu hwebhatiri, kuderedza kuchengetedza kwebhatiri.
5. Kubudirira kwepamusoro.
6. Yechigarire magineta jenareta brushless, hapana inotsvedza mhete chimiro, kubvisa kabhoni bhurashi uye inotsvedza mhete friction yakagadzirwa neredhiyo kupindira, asi zvakare inoderedza jenareta pane ambient tembiricha zvinodiwa.
5kw - 20kw 48v 96v 120v 220v 380v zvachose magineti jenareta alternator
20A 12V 24V AUTO MPPT mhepo turbine charger controller
Imba yeAluminium yekutonhodza zviri nani, IP67 dziviriro
● Pamusoro pekuchengetedzwa kwechaji, kuchengetedzwa kwemagetsi kupfupi kwedunhu.
● Mutongi ane basa rekudzivirira kupisa kwepamusoro
● Chiedza chechiratidzo chinoratidza mamiriro ehurongwa.
●Boost kuchaja basa.Inokwanisa kuchaja mumhepo.
FLTXNY 1kw 2kw 3kw Horizontal Wind Turbine Jenareta Yekushandisa Pamba
1. Imba yesimbi yeA3, inoita saizi diki, huremu huremu, kutaridzika kwakanaka uye kuderera kwekushanda.
2.flange connection inovimbisa simba rakanaka, nyore kuisa uye kugadzirisa.
3.enhanced fiberglass turbine blades ne optimized aerodynamic shape design uye kugadzirwa kwemaitiro, inogona kuderedza kutanga kwemhepo uye kushandiswa kwesimba remhepo.
Iyo blade yakaputirwa nejeli coat resin uye yakapendwa kuti isaita ngura nemhepo nemvura.
4. chidzoreso chemuswe chine otomatiki chinogonesa iyi turbine yemhepo yakachinjika (muswe unongoerekana wazungunuswa nemhepo ine simba uye wobva wangodzoka nemhepo yakachengetedzeka) simba rekudzivirira dutu repamusoro.
5. magineti echigarire ekunze rotor dhizaini, yakaderedza kupikisa torque uye yakanaka kwazvo kupisa kupisa kuita kana ichienzaniswa nemukati rotor jenareta.
6. 42NSH magineti simbi chidimbu ane simba magineti uye yakakwirira tembiricha kuramba.
7. F-kirasi enameled waya aigona kumira 150 madhigirii tembiricha; coil kushanda kuchengetedzwa kunovimbiswa.
8. ganda remuviri rakashongedzwa nedacromet uye rakapetwa kaviri anti-corrosion pendi, kuve nechokwadi chekuti ngura yakasununguka mushure mekushanda kwenguva refu.
S2 200w 300w 12v 24v 48v Horizontal Wind Turbine Jenareta
S3 600w 800w 12v 24v 48v diki yakatwasuka mhepo turbine jenareta
1.Low start up speed, 3 blades, high mhepo simba rekushandisa
SC 400W 600W 800W AC diki mhepo jenareta repamba/mumugwagwa
Wuxi Flyt New Energy Technology Co., Ltd., inyanzvi inogadzira madiki uye epakati-saizi mhepo turbine masisitimu uye akakodzera zvinhu.
© Copyright - 2011-2021 : Kodzero Dzose Dzakachengetedzwa.